कोरोना प्रभावित नतिजा बारे के भन्छन् त विद्यार्थी - DURBAR TIMES
HomeEducationकोरोना प्रभावित नतिजा बारे के भन्छन् त विद्यार्थी
कोरोना प्रभावित नतिजा बारे के भन्छन् त विद्यार्थी
२०७६ सालको एसईईको नतिजा विद्यार्थीको आन्तरिक मुल्याङ्कनको आधारमा प्रकाशित भएको हो । कुल चार लाख ८२ हजार नौ सय ८६ विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन दिएकोमा चार लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको नतिजा आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। एसईईको नतिजा सोमबार प्रकाशित भएसँगै हामिले विद्यार्थीहरु को नतिजा प्रति कस्तो धारणा रह्यो भनेर जान्न चायौ र हेर्नुहोस उनिहरुको भनाइ जस्ताको त्यस्तै:
प्रजोल खड्का विन्सम इङलिस बोर्डिङ स्कुल, नारायणटार, शिवचोक
साथी भाई को नतिजा सुन्दा सर्वप्रथम म आश्चर्य चकित भए। नाम चाहिँ नलिउँ तर विगतमा ८ ओटा विषय मध्ये ६ ओटा मा डी ग्रेड आउने को ३.७० आयो भन्ने सुनेर म झसङ्ग भए।मैले कमसेकम ३.९ ल्याउने लक्ष्यले चैत्र ३ मा पढाइ सुरु गरेको थिएँ। त्यसैले नतिजा सोचेको भन्दा अलि बढी आयो। विगतको परीक्षा र अहिलेको परीक्षा भनेको सुन लाई पित्तल तोलेको झै भएको छ। क्लास ७ देखि नै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बन्ने सपना भएको कारण विज्ञान नै पढ्छु।
बिनिता सापकोटा,श्री राजेश्वरी माध्यमिक विद्यालय ,ईन्द्रावति गाउँपालिका-७ सिन्धुपाल्चोक
पहिला नै एईई परीक्षा स्थगित हुने हल्ला चलिरहेको थियो। त्यहि पनि हामी अघिल्लो दिन नै परीक्षा दिन भनेर परीक्षा केन्द्र पुग्यौ। केही समय पछि परीक्षा स्थगित भयो भन्ने खवर सुनियो । त्यतिबेला सारै दु:ख लाग्यो किनकि परीक्षाको लागि निकै तयारी र मेहेनत गरेका थियौ । केही समय परीक्षा नहुने नै भयो। नतिजा विद्यालयको अान्तरिक मुल्यांकनका अाधारमा प्रकाशन हुने भए छ। नतिजा राम्रो अाउछ भन्नेमा दुई मत थिएन र मेरो नतिजा ए प्लस अायो । अनि अब ल्याप टेक्निकल पढ्ने सोचमा छु। कोरोनाका कारणले यो वर्षको एसईई परीक्षाको अनुभव अलि फरक रहयो।
प्रनिसा आचार्य,मिनिल्यान्ड इङलिस हाइ स्कूल, काठमाडौं,थलि
एसईईको को रिजल्ट त्येही दिन आउछ भनेर थाहा थिएन। परिक्षा हुन्छ भन्ने समय सम्म त तयारी एकदमै राम्रो थियो । नतिजा प्रकाशित भए पछि खुसी लाग्यो आफुले सोचेको जस्तै नतिजा प्रकाशित भएछ। तर पनि परिक्षा नदिइकन आएको नतिजाले त्येति सुखि नमिल्दो रहेछ। अब भने म्यानेजमेन्ट पढ्ने बिचार गरेको छु ।
बिबेक राई, ज्ञानमाला इङलिस हाइ स्कूल, काठमाडौं ,कपन
राम्रो सँग पढेको थिएँ तर अन्तिम समयमा आएर परिक्षा नहुने भयो तर ठिकै हो कोरोनाको तार्स थियो कोरोना लाग्न सक्थोहोला एसईई भएको भए । पहिला को परीक्षा को मुल्यांकन गरी दिने भनेको सुनेको थिए जे होस् सोचे भन्दा राम्रो नतिजा आयो तेस्मै खुसी छु । अब ११ मा चै होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्छु । उनले हास्दै जवाफ दिए।
राजन रम्तेल, श्री राजेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, ईन्द्रावति गाउँपालिका-७ सिन्धुपाल्चोक
जब म एसईई दीन को लागि केन्द्र मा गए तब मलाई एउटा जिन्दगीको महसुस भयो कि महिले नि अब राम्रो गरेर जिवन बनौछु भनेर जब महिले एसईई नहुने सुनी तब म पागल जस्तो भए केही सोच्न सकीन के गर्नु सोची हाम्रो भाग्यमा रैहिन्छ । जब विध्यालय बाट नतिजा आउँछ् भन्दा नीकै खुशी भए। तर मलै आस गरेको जस्तो मुल्यांकन आएन तर नि एस्तै हो जस्तो लाग्यो होस भन्ठाने। मेरो A आएको छ मैले ईन्जिनियर पढ्ने निर्णय गरेको छु ।
यज्ञ गजुरेल, आलोक विद्याश्रम स्कुल
मलाई एस ई ई पास भए पछी निकै आनन्द अनुभव भयो। विद्यार्थीको iron gate भन्ने परीक्षा कटाए पछी म ढुक्कै भए। मैले आफ्नो तरिका निकै मेहेनत सित गरेको थिए। बिहान ७ बजे देखी बेलुका ८ बजे सम्म मैले रूटिन बनाएर पढ्ने गर्थे। मेरो नतिजा सोचेको जस्तै अयो। मेरो परीक्षा फल मा A+ आउछ भन्ने मैले सोचेको थिए। मेरो A+ नै आयो। एस ई ई को यसपाली अनुबभ निकै अनौठो भयो। अब मैले बिज्नेस म्यानेजमेन्ट पढ्ने योजना गरेको छु। बिज्नेस म्यानेजमेन्ट मेरो पहिलो रोजाइको विषय थियो र मैले यस्मै पढ्ने योजना गरेको छु।
निशू शर्मा, जेभियर्स इन्टरनेसनल स्कुल, काठमाडौं ,बौद्ध
सोचेको जस्तै अंक प्राप्त भएकोले म पास भए पछि एकदमै खुसी थिएँ।तयारी र पूर्ण रूपमा आफूले सक्ने जति मेहनत गरेकी थिएँ।नतिजा जति आओस भनेर मूल्याङ्कन गरेको थिएँ अपेक्षा अनुसार प्राप्त भयो।एस ई ई दिन नपाएकोले पूर्ण रुपमा केही अनुभव छैन तर अब हामीले यो परीक्षा दिन नपाएकाले अब प्लस टू मा चैं अलि गाह्रो होला की भन्ने अनुभव भइरहेको छ ।म अब कक्षा एघारमा म्यानेजमेन्ट पढ्ने योजनामा छु ।
Previous articleनिषेधाज्ञा के हो ? कैले देखी कसरी लागु हुन्छ ? (पूर्ण पाठ)
Next articleराष्ट्रिय झण्डा जलाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ